DAAWO:-Mudaharaad xoogan oo ka socda Garowe | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Mudaharaad xoogan oo ka socda Garowe
DAAWO:-Mudaharaad xoogan oo ka socda Garowe
Mudahaarad xoogan oo loogasoo horjeedo diidmada lacagta shilinka Soomaaliga iyo sicirka bararka ayaa saakay ka socda magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, waxaana gabi ahaanba albaabada loo xiray xarumaha ganacsiga.
Dadweynaha mudaharaadaya ayaa maamulka ku eedeeyay inuu masuul ka yahay dhibaatada culus ee Puntland ka jirta, iyagoo u sababeeyay go’aan uu dhawaan madaxweyne Deni ku joojiyay in canshuurta ilaha dakhliga lagu bixiyo shilin Soomaali.
Dadweynaha iskusoo baxay ayaa dalbanaya in maamulku wax ka qabto dhibaatada jirta islamarkaana uu dib uga laabto go’aamada mugdiga galinaya lacagta Soomaaliga ah.
Mudaharaadkan ayaa kusoo beegmaya kadib markii uu xalay dhaqan galay go’aan lagusoo rogay shirkaddaha bixiyaha adeega lacagaha moobaylada la iskugu diro, go’aankaas oo ah in aan la isku diri karin hal dollar iyo wixii ka yar.
Sicir bararka Puntland ka jira ayaa sii xoogaystay kadib markii ay uu mugdi gashay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga, iyadoo Puntland ahayd meesha kaliya ee Soomaaliya aan waligeed laga diidin lacagta Shilinka Soomaaliga.
Previous articleWaa kuma ninka loo doortay Guddoomiyaha Guddiga doorashada?
Next articleGaadiid Xamuul kii ugu badnaa oo ku xaniban Duleedka Garoowe +SAWIRRO
DAAWO su’aalo adag oo laweeydiiyay Dahir Maxamuud Geellee
Mas’uuliyiintii dowladda ee lagu xanibay garoonka Nairobi oo Muqdisho lagu soo...